जहाँ महिलाहरु नै कण्डम माग्न जान्छन् Kasthamandap Daily
झुम्का । सविना चौधरीः दिदी छ ?
चन्द्रा चौधरीः के छ भनेको ? छैन, छैन । श्रीमान्लाई नै लिन पठाइदेऊ, कहाँ जानुभो र उहाँ ?
“तर आजभोलि यहाँका केही पुरुषहरु आफ्नी श्रीमतीलाई ढाल लिन पठाउँछन् ।” उनले भनिन् । किन त रु भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “पछिल्लो समय बच्चा धेरै जन्माउनु हुँदैन भन्ने जानकारी एवं सचेतना महिलामा बढेको छ । समुदायमा ‘सानो परिवार, सम्पन्न र सुखी परिवार’को धारणा हुर्किँदै गएको छ । महिला तथा पुरुष दुवैमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मेरो त एउटा मात्र छोरा छ, अर्को बच्चाको कमै चाहना छ ।”
अर्कोतर्फ, सुनसरी जिल्लालाई एचआइभी सङ्क्रमितरहित जिल्ला बनाउने अभियानमा एचआइभी सङ्क्रमित एक महिला लागेकी छिन् ।
घरमा सुत्केरी गराउने अवस्था अन्त्य हुँदैः उपमहानगरपालिका
इटहरी उपमहानगरपालिकाले आव २०७५।०७६को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, बाल एवम् शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमितामा राखेको छ ।